Abaculi bamaskandi balwisana nobugebengu oGwini | News24
ABACULI bamaskandi ePort Shepstone bamema umphakathi ukuba uhlanganyele nabo emkhankasweni nekhonsathi yokulwisana nokubulawa kwabesifazane, izingane nabebala elimhlophe, ngosuku lweNtsha ngomhla ka-16 kuNhlangulana (June) KwaMatu Centre .
Lo mcimbi uzobe unesiqubulo esithi Phansi ngokuhlukunyezwa Komama, Ukubulawa Kwezingane Nabebala Elimhlophe.
Omunye wabahleli bomcimbi uMnuz Sivuyile Mgojo uthe lo mcimbi uzoqala ngomkhuleko njengoba kumenywe amabandla ahlukene ukuba abe yingxenye yalo mcimbi ngenhloso yokukhulekela lezi zigemeko zalabo ababulawayo.
Uthe: “Uma sekukhulekiwe zizobe sesiqala umcimbi lapho sizobe sinandisa khona ngomculo. Abaningi bayazi ukuthi umculo kamaskandi udlala indima enkulu ekudluliseni umyalezo emphakathini.
“Sicela abazenkolo nomphakathi ukuba bahlanganyele nathi kulo mcimbi ukuze sikhulekele lomkhuba osewandile ezweni lethu.
“Sizwile emasontweni adlule ngezingane ezibulewe kwantshontswa nezicubu zazo. Lolu daba lusiphathe kabi singabaculi bamaskandi,” kusho uMnuz Mgojo.
Uthe kumele umphakathi ubambisane ukuze lomkhuba ungaqhubeki nendawo yethu ingadumi kabi.
“Lezehlakalo zimbi futhi zicekela phansi indawo yethu kwezomnotho nakwezokuvakasha. Yingakho kumele sisukume silwe futhi sidlulise umyalezo ezindaweni zonke, nakomasipala bonke abangaphansi koGu.”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngalo mcimbi xhumana noMnuz Nkanyiso Ngwazi enombolweni ethi: 072 729 5523 noma uMnuz Sivuyile Mgojo enombolweni ethi: 073 383 6325.